ဒါက iPhone X ပါ Androidsis
iPhone X၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုလား။
မနေ့ကပဲ fanboys များအတွက်ယခုနှစ် quintessential ဖြစ်ရပ် ဒါကိုဘယ်သူမှမမြင်သေးဘူး စတိဗ်ဂျော့စ်က Apple ကိုစွန့်ခွာပြီးကတည်းကသူ့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုဟာကုန်ဆုံးသွားခဲ့တယ် နှင့်ကဏ္ it ရှိအခြားကုမ္ပဏီများနှင့်အမြဲတမ်းခွဲခြားခဲ့သောဝိသေသလက္ခဏာ၏လက္ခဏာသက်သေ။
သူတို့ကိုအခြားသူများမှထင်ရှားစေခဲ့သည့်ဤကြီးမားသောခြားနားချက်မှာ Cupertino ၏အလွန်ထူးကဲသောစိတ်ထားနှင့်အတူအလွန်ပင်ထူးကဲသောစိတ်ဖြစ်သည်။ အတွေးအမြင်အသစ်များကိုသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည့်ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်ဖြစ်သည် နှင့်အတူတူပင်တစ် ဦး ဝိသေသလက္ခဏာတံဆိပ်ခေါင်း။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်အသစ်များကိုတင်ဆက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Apple သည်ယခုအချိန်တွင်အများဆုံးမျှော်မှန်းထားသည့်အရာမှာတရုတ်စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီအများအပြားသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုရည်မှန်းချက်ထားရန်ဖြစ်သည်မှာခိုင်လုံသောသက်သေသာဓကများဖြင့် ပြော၍ အတည်ပြုနိုင်သည် သင်၏ပြိုင်ဆိုင်မှု၏နည်းပညာတိုးတက်မှုများကိုပိုမိုကူးယူပါ တိုက်ရိုက် စတိဗ်ဂျော့ဘ်ကံဆိုးစွာပျောက်ဆုံးသွားပြီးနောက်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
1 Apple ၏ iPhone X ၏တီထွင်မှုများ
1.1 All-screen concept သည်အနည်းငယ်ဆန်းသစ်သောဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်သည်
1.2 နောက်ဘက်ကင်မရာနှစ်လုံးသည်ဤအချိန်သည်၎င်း၏ရှုထောင့်များကြောင့်တီထွင်ဆန်းသစ်နိုင်မှုနှင့် terminal ၏ကိုယ်ထည်မှထွက်လာသောအရာ!
2 မျက်နှာပြင်အပြည့် terminal ကိုတကယ်လိုအပ်ပါသလား။
3 ပြီးတော့ဒီတီထွင်မှုအားလုံးဟာကျိုးနွံတဲ့စျေးနှုန်းအတွက်ဒေါ်လာ ၁၃၀၀ !!
Apple ၏ iPhone X ၏တီထွင်မှုများ
All-screen concept သည်အနည်းငယ်ဆန်းသစ်သောဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်သည်
ရှေ့ကင်မရာများနှင့်အာရုံခံကိရိယာများသွားသည့်နေရာတွင် Apple iPhone X ချွတ်သည်
မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး၏အတွေးအခေါ်သို့မဟုတ်အတွေးအခေါ် (သို့) မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး၏သဘောသဘာဝနှင့်အတူ Apple မှယူဆောင်လာသည့်သက်ဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည် Android မှအကြံဥာဏ်နှစ်ခုမှတိုက်ရိုက်အမွေရရှိသောအယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကနယူးယောက်၌ပြသခဲ့သော Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 Plus သို့မဟုတ် Samsung Galaxy Note 8 ကိုယ်တိုင်၏အဆုံးမဲ့မြင်ကွင်း.
ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ကျကျဖြစ်ရမယ်။ အရင်ကပြောခဲ့ဖူးတဲ့ဒီ Samsung ရဲ့အဆုံးမဲ့မျက်နှာပြင်ကိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် iPhone X အသစ်ရဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးရဲ့အယူအဆကတော့ Samsung Galaxy S8 ကိုတရားဝင်မဖြန့်ချိမီကတည်းကပင်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကပေါ်လာသောပရောဂျက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အတိအလင်းဖော်ပြခဲ့သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖုန်း (သို့) မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး၏ terminal ကိုစိတ်ကူးဖြစ်စေရန်စျေးကွက်အတွင်းပထမဆုံးသော terminal ဖြစ်လာလိမ့်မည်.
Andy Rubin ရဲ့မရှိမဖြစ်ဖုန်းထိပ်
ယခုခေတ်လအနည်းငယ်အကြာတွင် Andy Rubin ၏ terminal သည် Android ၏ဖခင်ကိုတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ သူသည် All-screen Android Terminal တစ်ခု၏အယူအဆတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်၊ ထိုအချိန်သည်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ Apple သည်၎င်း၏ ၁၀၀ x ၁၀၀ မှ၎င်း၏တီထွင်မှုကိုတီထွင်ရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည် iPhone X (သို့) ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် Andy Rubin ရဲ့မရှိမဖြစ်ဖုန်းမိတ္တူ အနည်းဆုံး၏အယူအဆနှင့်စပ်လျဉ်း «မျက်နှာပြင်အားလုံး» အနည်းငယ်သေးငယ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုချွေတာလက်တွေ့ကျကျတူညီသည်အဘယ်မှာရှိ။
iPhone X မျက်နှာစာ
သငျသညျအကြှနျုပျကိုအလျင်အမြန်နှင့်တစ် ဦး နှင့်အခြားအကြားခြားနားချက်ကိုမြင်လျှင်, ငါနေဆဲကြောင်းပြောနိုင်ပါတယ် iPhone X သည် Andy Rubin ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖုန်းနံပါတ်တစ်ခု၏စျေးကြီးသောမိတ္တူတစ်ခုဖြစ်သည် iPhone X ၏ထိပ်တွင်တွေ့ရသောကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောတစ်ဝက်အလျားလိုက်အစင်းကြောင်းကိုလျစ်လျူရှုပြီးရှေ့ကင်မရာအာရုံခံကိရိယာနှင့်နီးကပ်သည့်အာရုံခံကိရိယာများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းနှင့်အခြားအာရုံခံကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသည့်စမတ်ဖုန်းများသည်များသောအားဖြင့်သယ်ဆောင်လာသည်။ ။
ကကြောင်းမှန်သည်နေစဉ် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖုန်းသည် terminal ၏အောက်ခြေတွင်အစင်းတစ်ခုရှိသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါ့ကိုရန်ကထက်အခြားတစ်နေရာရာမှာ terminal ကိုဖမ်းပြီးနိုင်ဖြစ်ဖို့အများကြီးပိုဗေဒနှင့်ပို။ ပင်အသုံးဝင်ပုံရသည် "မျက်နှာပြင်အားလုံး" နှင့်က terminal ကို၏မှန်ကန်သောခြယ်လှယ်ဘို့ကျွန်တော်တို့ကိုနှောင့်အယှက်မပေးပါဘူး။
ငါဘာအကြောင်းဒီပြောကြသည် ငါက terminal ကိုသူ့ဟာသူ၏ဒီဇိုင်းကိုပေးသည်ဆက်လက်ဖို့ကပိုပြီးဗေဒရှာပါ မြင်ကွင်း၏ထိပ်ဆုံးတွင်အကွာအဝေးတစ်ဝက်သည် terminal ၏အောက်ခြေတွင်ရှိပြီးအလျားလိုက်အစက်အပြောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြင်နိုင်ဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းစွာအကြောင့်ကြောင့်။
နောက်ဘက်ကင်မရာနှစ်လုံးသည်ဤအချိန်သည်၎င်း၏ရှုထောင့်များကြောင့်တီထွင်ဆန်းသစ်နိုင်မှုနှင့် terminal ၏ကိုယ်ထည်မှထွက်လာသောအရာ!
iPhone X ၏နောက်ဘက်ကင်မရာ
ဒီတစ်ကြိမ်တည်းမှာပဲ Apple မှအင်ဂျင်နီယာများ၊ ဒီဇိုင်နာများနှင့်အခြားနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီကြီးများမှလူများနှင့်သဘောတူရန်လိုသည်ဆိုလျှင်၊ iPhone X နှင့် iPhone 8 နှင့် iPhone 8 Plus တို့၏ဒီဇိုင်း၎င်းသည်အနည်းဆုံး iPhone အသစ်၏အသွင်အပြင်များထဲမှတစ်ခုကိုသိ ရှိ၍ တီထွင်နိုင်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်ဖြစ်ခြင်းအတွက်သံသယဖြစ်စရာကောင်းသည်။ စျေးကွက်ရှိအပါးလွှာဆုံးဆိပ်ကမ်းများမှာကြီးမားသော shit သည်၎င်း၏နောက်ဘက်ကင်မရာဖြစ်ပြီး terminal ၏ကိုယ်ထည်မှဒေါသထွက်စေသည်။.
ထိုကဲ့သို့သောအတိုင်းအတာနှင့်အတူ ၎င်း၏ 12 + 12 megapixel dual အနောက်ကင်မရာသည်ယနေ့ဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးမှန်ဘီလူးများဖြစ်ကြောင်းမျှော်လင့်ကြပါစို့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ shit ကပိုကြီးလာလိမ့်မယ်။
မျက်နှာပြင်အပြည့် terminal ကိုတကယ်လိုအပ်ပါသလား။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါကအရမ်းလှပပြီးတုန်လှုပ်စေသောကိရိယာများဖြစ်သောကြောင့်သူတို့သည်ငါတို့အားကမ်းလှမ်းခဲ့သည့်ရသဗေဒကြောင့် All-screen ဟုခေါ်သောဆိပ်ကမ်းများကိုကြိုက်သော်လည်း၊ တစ်နေ့မှတစ်နေ့အခြေခံအားဖြင့်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်သည်အလွန်အသုံးဝင်သည်ဟုမယူမှတ်ပါ။ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံသည်ထိတွေ့မှုနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းကဲ့သို့သောအယူအဆများစွာတွင်လိုချင်သောအရာများစွာကျန်ရှိသည်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်သာတဲ့အနည်းငယ်မျှသော frame များကိုပိုနှစ်သက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီ terminal ကိုနေ့စဉ်သုံးခြင်းကအမှန်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကအများကြီးပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
မှတ်ချက်ပေးပါရစေ။ Apple ကကျွန်တော်တို့ကိုတီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် terminal concept အသစ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်လျှင်မကောင်းသောဆိပ်ကမ်းများပေးထားသည်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မထင်မှတ်ပါ။ Apple သည် Android ဆိပ်ကမ်းများအပြီးတွင်ကာလရှည်ကြာစွာစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ရသည်; အချိန်ကြာမြင့်စွာ Samsung ၏အပြီးတွင်, ယခုအန်ဒီရူဘင်နှင့်သူ၏ Essential ဖုန်းတို့မှတင်ပြသောအယူအဆအရ၊ ၎င်းတို့တွင်မတူညီသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကွဲပြားခြားနားမှုများရှိသော်လည်း ၎င်း၏နောက်ဘက်ကင်မရာများ၏အထူသည် iPhone X ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီ ဖြစ်၍ ကောင်းမွန်သောအရသာအတွက်စော်ကားမှုဖြစ်သည်။.
ပြီးတော့ဒီတီထွင်မှုအားလုံးဟာကျိုးနွံတဲ့စျေးနှုန်းအတွက်ဒေါ်လာ ၁၃၀၀ !!
၎င်းသည် Apple သည်မည်သည့်တီထွင်မှုနှင့်ထူးခြားမှုကိုတီထွင်ရမည်နှင့်မည်မျှထူးခြားသည်ကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ လက်ရှိစမတ်ဖုန်းဈေးကွက်တွင်ဈေးအကြီးဆုံးဆိပ်ကမ်းများသင်အားလုံးသည် iTunes ပါသည့်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာရှိရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်တံခါးပိတ်ဟောင်းနွမ်းနေသောခေတ်ကုန်သွားပြီဖြစ်သော operating system ကိုသယ်ဆောင်ထားသော်လည်း၎င်းတို့သည် hotcakes ကဲ့သို့သောဆိပ်ကမ်းများရောင်းရန်သေချာသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ ပိုမိုခက်ခဲစေနိုင်သောကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလေးစားမှုအားလုံးနှင့်အတူသင့်အားပြောပြပါ။ Apple သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာစကားပြောခဲ့ပြီးစိတ်ကူးသစ်အသစ်များတီထွင်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမြဲတမ်းပြောဆိုနေသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းဟာသစ္စာရှိပရိသတ်တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စတိဗ်ဂျော့ဘ်၏ရှည်လျားသောအရိပ်နောက်ကွယ်တွင်နေထိုင်ခြင်းကိုသူတို့ကုတ်ခြစ်ထားသည်ဤအခိုက်အတန့်၌သူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသောအရိပ်။ သို့သော်၎င်းသည်ညှိုးနွမ်းစပြုလာသောအခါမည်သို့ဖြစ်လာမည်နည်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » iPhone X၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုလား။
ကျွန်ုပ်သည် operating system အားလုံး၏အသုံးပြုသူဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်မသိပါကကြည့်ပါ။ မနက်မှာငါ Linux နဲ့လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတည်းဖြတ်ပြီး MAC နဲ့ဆောင်းပါးတွေရေးတယ်။ နေ့လည်ပိုင်းမှာရိုးရှင်းတဲ့ဆောင်းပါးတွေရေးဖို့အိုင်ပက်မီနီကိုသုံးတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒီသဘောမျိုးကအကျိုးဖြစ်ထွန်းတာမဟုတ်ဘူး၊ , Windows သို့မဟုတ် MAC ။
ဒါကြောင့်မင်းကသဘောတူတယ်၊ မတူဘူးဒါပေမယ့်ငါဘာပြောနေတယ်ဆိုတာငါကောင်းကောင်းသိတယ်၊ ဘာကြောင့်ငါပြောနေတာလဲ၊ ငါပြောနေတာကိုငါမသိဘူးလို့ငါ့ကိုမပြောလိုက်နဲ့ငါကိုယ်တိုင်ဘယ်သောအခါမှမဆန့်ကျင်ဘူး။ ။
Apple သည်စမတ်ဖုန်းခေတ်ကိုတီထွင်ရန်တာ ၀ န်ယူခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်သူတွေအားလုံး Apple ကိုကူးယူပြီးတဲ့အခါမှာ Cupertino မှသူများသည်အခြားသူများ၏အတွေးအခေါ်များကိုကူးယူနိုင်ခြင်းသည်အလွန်ကျန်းမာပါတယ်။
သင်ဟာအက်ပဲလ်ဟာသက်ဆိုင်မှုမရှိတော့ဘူး (သူကဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေမရှိတော့ဘူး) လို့ခံစားရတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့၊ လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုစောင့်နေတုန်းပါပဲ။ 3,5 jack ကိုဖယ်ရှားခြင်း၏မိုက်မဲသောဖက်ရှင်၊ iPhone7နှင့်ယခုစတင်ခဲ့သောအရာ Android စွမ်းဆောင်ချက်သည် (ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်) ကူးယူခြင်းဖြစ်သည်။ ငါသည်သင်တို့ကို Apple ကတီထွင်နည်းပညာများမဟုတ် (ပိုပြီးဆန်းသစ်တီထွင်မှုမဟုတ်) ဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်အများအပြားအမည်ကိုနိုင်ပေမယ့်သူတို့ကသူတို့ရဲ့ iPhone ကိုတွင်ထည့်သွင်းသောအခါသူတို့ (နှစ်ဆကင်မရာကဲ့သို့) ကျယ်ပြန့်ဖြစ်လာမှစတင်ပေမယ့်သင်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ကတည်းက, ငါသိ၏ငါသိ၏ သူတို့ကို။
အခုတော့ iPhone နောက်ဆုံးမှာကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းပါ ၀ င်လာပြီဆိုလျှင်ဒီနည်းပညာကိုအခြားထုတ်လုပ်သူများကအလယ်အလတ်တန်းစားမှာထည့်သွင်းသွားမှာသေချာသည်။
သင်သိပြီးသားအချက်များအရ၊ ၎င်းသည်တည်ရှိပြီးဖြစ်သောအရာတစ်ခုခုဖြစ်လျှင်တောင်မှ၎င်းသည် iPhone ပါ ၀ င်သည့်အခါမှသာလျှင်အခြားထုတ်လုပ်သူများကသူတို့၏စျေးနှုန်းချိုသာသောပစ္စည်းများကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်စွန့်ခွာသွားကြသည်။
ကင်မရာ၏အကြောင်းအရာတွင်၎င်းသည်မည်သို့ပြုမူသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အထူအတွက်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသောဓာတ်ပုံများထွက်ပေါ်လာမည်ဟုကျွန်ုပ်သံသယရှိသည်။ သင်အလွန်ချီးမွမ်းဂုဏ်တင်ပြီးကင်မရာတွင်အထူမရှိသည့် Essential ဖုန်းသည်၎င်း၏ပုံရိပ်အရည်အသွေးနိမ့်မှုအတွက်အလွန်အမင်းဝေဖန်ခံရသည်ကိုသတိရပါ။
ခင်ဗျားဟာဒီလိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကငြင်းခုံမှုမှာသိပ်မကောင်းဘူး၊ တကယ်တော့အက်ပဲလ်ဟာပစ္စည်းအသစ်တွေကိုမဖန်တီးတော့ပေမယ့်သူကများစွာသောထုတ်လုပ်သူတွေကိုသူတို့ကိုအလယ်အလတ်တန်းစားအဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့အတွက်စားသုံးသူတွေကိုအကျိုးရှိစေတယ်။
Apple က၎င်းကိုပြီးမြောက်ပြီးဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သမျှအားလုံးကို Apple ထံမှအကြွေးမယူပါနှင့်။
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည် Nexus 5X (မကြာသေးမီကရောက်ရှိလာသည့် Oreo!) ၏အသုံးပြုသူဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ကျွန်ုပ်သည် iPhone (6) နှင့်ချစ်လှစွာသော Lumias (Whindows Phone နှင့် Windows 10 Mobile) တို့ကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါ Linux, Windows, Mac, BSD, Solaris စသည်ဖြင့်လည်းသုံးသည်။
မင်းအသံကျယ်လို့ပြောနိုင် ဒါပေမယ့်မရှင်းဘူး ဒါကသော့ချက်မှတ်စုရဲ့အကျဉ်းချုပ်ကိုမြင်တဲ့အခါမနေ့ကကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာပါ။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမရှိပါ။ သူတို့ဟာပြိုင်ဘက်တွေကိုသာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်။
အကယ်၍ မှန်ပါကမျက်နှာ၏အာရုံခံကိရိယာသည်အခြားသူများ၏ရှေ့တွင်နည်းပညာရှိသည်။ သို့သော်ဆိတ်ကွယ်ရာကြောင်းဘာမျှမက။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အလင်းရောင်နည်းတဲ့နေရာတွေမှာဒီ sensor ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကြည့်ချင်တယ်။ Iris sensor နဲ့ face sensor နှစ်ခုလုံးဘယ်လောက်ပဲအလုပ်လုပ်နေပါစေအသုံးမ ၀ င်တော့ဘူး။ ဒီနေရာမှာဘယ်သူမှဝေဖန်မှုမှလွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသည့်ဤ iPhone X သို့မဟုတ် Galaxy Note 8 ကဲ့သို့သောခေါင်မိုးမှတစ်ဆင့် terminal ၏စျေးနှုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။
ပထမဆုံးအနေဖြင့်ကြိုးမဲ့စနစ်မဟုတ်သော်လည်းအခြေခံအားဖြင့်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည် Samsung တွင်ရှိပြီးဖြစ်သောအရာတစ်ခုအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ Apple ကစမတ်ဖုန်းခေတ်ကိုစတင်ခဲ့တာလား။ ပထမ ဦး ဆုံးအိုင်ဖုန်းမတည်ရှိမီနှင့်အခြားအရာများကိုမလုပ်ဆောင်မီကတည်းကရှိခဲ့သည်။ ဂျော့ဘ်၏စွဲလမ်းမှုဖြစ်သောအက်ပဲလ်သည်ထုတ်ကုန်များထက်ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပို၍ ဂရုစိုက်ခဲ့သည်။ android မှာ Apple တီထွင်ခဲ့တဲ့တီထွင်မှုတွေထက်အများကြီးပိုပြီးတီထွင်ခဲ့ကြတာပါ။ အက်ပဲလ်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာနှောင့်နှေးနေတဲ့အချိန်မှာသူတုို့ကသူတုို့ရဲ့ကောင်းကွက်တွေအားလုံးကိုကူးယူနေတယ်၊
ငါကတကယ်တော့ကြိုးမဲ့မဟုတ်ပေမယ့်အင်္ဂလိပ်လိုအားဖြင့်ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း (inonsive charging ထက်ပိုပြီးလူသိများတယ်) (nonsense နှင့်အတူအငြင်းပွားရန်ကြိုးစားခြင်း) ။
ဒီ "Pre-iPhone" စမတ်ဖုန်းအတော်များများကိုသုံးပြီးမှတ်မိခဲ့တာကတော့သူတို့ဟာစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်။ အခုအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းမွန်တဲ့ Android နဲ့ iPhone ထုတ်ကုန်တွေလိုပဲ။ သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့ကြသလဲ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဘယ်သူတွေလဲ၊ သူတို့ကိုငါမမှတ်မိတော့ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့လိုအပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။
အကယ်၍ သင်သည်မှန်ကန်စွာဖတ်ရှုပါက Apple သည်ကူးယူခြင်းမပြုကြောင်း၊ ဒါနဲ့နားလည်မှုကိုဖတ်ရှုပြန်လုပ်ပါ။
ငါ Apple နှင့်၎င်း၏ iPhone ကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ပရိသတ်တစ် ဦး အနေဖြင့်ခုခံကာကွယ်သည်ဟုထင်ရသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်မူ iPhone ကိုကျွန်ုပ်မသုံးပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Android စနစ်ဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်ပိုနှစ်သက်သည် (ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည် Mi A1 ကိုစောင့်နေသော Xiaomi ၏ပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်) ။
သူတို့တွေဒီလိုဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ Android နဲ့တာလီဘန်တွေဖြစ်ပြီး Apple ကနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်၊ Android သုံးစွဲသူများနဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားတွေရဲ့အရေးပါမှုကိုမတွေ့ရပါ။
ဟုတ်ပါတယ်, ထင်မြင်ချက်အားလုံးလေးစားဖွယ်ဖြစ်ကြပြီးအဆုံး၌သငျသညျ terminal ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားကိုသင်စိတ်ဝင်စားအသုံးပြုမှုပေါ်မူတည်။ ...
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည်နည်းပညာကိုအရူးအမူးဖြစ်စေရန်မဟုတ်ဘဲ၎င်းကိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံဖြင့်ပျက်ကွက်ခြင်းသို့မဟုတ်သော့ဖွင့်ခြင်းအားဖွင့ ်၍ မရသည့်မျက်နှာနှေးကွေးမှုသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ ထားအာရုံခံကိရိယာများနှင့်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအသံပါသည့် Xiaomi Mix ကဲ့သို့သောအဆုံးမဲ့မျက်နှာပြင်သည်ဘာမျှမတန်ပါ။
- အဆုံးမဲ့မြင်ကွင်း - အံ့အားသင့်ဖွယ်အချိုးအစားနှင့်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအသံများရှိသောပထမဆုံး Xiaomi ... မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုအကောင်းဆုံးအလုပ်မှာအန်ဒီရူဘင်၏အလုပ်ဖြစ်သည်။ ဆော့ဝဲလ်တွင်မည်သို့အကောင်အထည်ဖော်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်းပြissueနာ။ OS အတွက်၎င်းသည်ပြproblemနာမဟုတ်ပါ၊ ယနေ့၎င်းသည်နာရီသာသိမ်းပိုက်ထားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ဂိမ်းများနှင့်မာလ်တီမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲပုံကိုမူ ဆက်လက်၍ ကြည့်ရှုရန်ကျန်ရှိနေသေးသည်။ iOS ရဲ့တစ်သားတည်းဖြစ်တည်မှုကြောင့် Android ကိုအသုံးပြုခြင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပေါင်းစည်းမှုကိုမျှော်လင့်ပါတယ်။ တကယ်တော့ဒါက Samsung ကစံနှုန်းကိုထိန်းထားခြင်းအတွက်လဲလှယ်မှုနှုန်းကိုလဲလှယ်ဖို့အတွက်လဲလှယ်မှုနှုန်းကိုဆုံးရှုံးဖို့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဆန်းသစ်မဟုတ်ပေမယ့်လမ်းကြောင်းသစ်နှင့်အတူဆက်လက်။
- ကင်မရာ - အကယ်၍ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီး IOS 11 တွင် (ရှည်လျားသောထိတွေ့မှုများအပါအ ၀ င်) ကတိထားသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါကအနည်းဆုံးအသစ်ထွက်ပေါ်လာသည့်အထိအနည်းဆုံးစျေးကွက်တွင် (၎င်း၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအတွက်) အကောင်းဆုံးဈေးကွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
- Face ID: ကြယ်၏အင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုကိုချန်လှပ်ထားသည်။ အသစ်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်မှောင်မိုက်၌ဖြစ်စေမျက်မှန်များနှင့်ဖြစ်စေ (S8 သည်မအောင်မြင်သောပျက်ကွက်မှု) သို့မဟုတ်မုတ်ဆိတ်မွေးပြားများနှင့်ပင်အလုပ်လုပ်ပုံရသည်။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ နောက်တစ်ခုကအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။
Power - iOS သည် HW မှအမြဲတမ်းပိုမိုထွက်ခွာသွားသည်။ ချန်လှပ်ထားသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ HW နှင့် SW နှစ်ခုလုံးတွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများစွာရှိသည်။ တိုးပွားလာသောအဖြစ်မှန်နှင့် VR သည်ထိုစွမ်းအင်ကိုလိုအပ်လိမ့်မည်။
- စျေး - ကျွန်တော်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအကြောင်းပြောနေတာလို့ထင်ပြီးအဲဒါကစီးပွားရေးပြproblemနာတစ်ခုပဲ။
စျေးကွက်ထဲမှထုတ်ကုန်အသစ်ထွက်တိုင်းအချိန်တိုင်းငါပစ္စည်းသစ်များကိုခံစားရရန်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်များသို့သွားလေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ပစ္စည်းအရည်အသွေးနှင့်ရိပ်မိအရည်အသွေးသည် Apple ဆိပ်ကမ်းနှင့်ဆင်တူသည့်အရာမရှိခဲ့ပါ။ လူတိုင်းသည်သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောဒီဇိုင်းကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်ပုဂ္ဂလဒိassessment္အကဲဖြတ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါထိပ်ပေါ်မှာဘောင်သို့မဟုတ်ဖြောင့်ဘောင်မရှိဘဲအိုင်ဖုန်း X ကြည့်ဖို့ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ယူဖြေရှင်းချက်ဖြစ်စေငါ့အကြောက်မက်ဘွယ်သောမထင်ထားဘူး။ လက်တွေ့တွင်၎င်းအားမည်သို့တန်ဖိုးထားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရမည်။
စမတ်ဖုန်းကိုအရည်အသွေးကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် iPhone ကအာမခံချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ Samsung, LG နဲ့ Sony တို့လိုအခြားရွေးချယ်စရာတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။ အိုင်ဖုန်းကင်မရာများကထင်ရှားသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်မည်သည့်မိုဘိုင်းလ်များ၏အထူကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်အကာအကွယ်အိတ်များကိုအသုံးပြုကြသည်။ ဤကိစ္စရပ်များတွင်ကင်မရာများသည်ကိုက်ညီမှုရှိခြင်းသို့မဟုတ်အနိမ့်အမြင့်အနေအထားသို့ရောက်ရှိခြင်း၊ အခြားဆိပ်ကမ်းများ။
ကျွန်ုပ်တွင်လက်ရှိ Samsung Galaxy A5 (2017) နှင့် iPhone 6S Plus ရှိသည်။ ပထမမှာ Android7နှင့်ဒုတိယဖြစ်ပြီး iOS11 တွင်ဖြစ်သည်။ သင်နှစ် ဦး စလုံး၌အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိနေသည်။ အလွန်ခက်ခဲသည်ဟုဆိုလျှင်အလွန်ခက်ခဲသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါအမြဲတမ်း iOS ကိုရွေးချယ်ခြင်းအဆုံးသတ်၎င်း၏ရိုးရှင်းသောနှင့်အနည်းဆုံးဂေဟစနစ်ငါ့ကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်သောကွောငျ့။ သူကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကိုလျှော့ချထားပေမယ့် Android terminals တွေလောက်တော့မလိုပါဘူး။ ဘယ်နေရာမှာမှငါ့ကိုသေချာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အလွှာတစ်စုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်မသိပါဘူး။ အစဉ်မပြတ်ငါ Apex နှင့် Lumos Icon Pack ကိုတပ်ဆင်ပြီးပါတော့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Android ပေါ်ရှိ application icon များသည်တကယ့်ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမိုဘိုင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်လူတိုင်းတွင်စိတ်ရှည်ခြင်းမရှိကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့်အတွက်ဗွီဒီယိုများသို့မဟုတ်တေးဂီတများကိုထည့်ရန် iTunes ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စိတ်ရှုပ်စရာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ဤသဘောမျိုးဖြင့် Android တွင်ဖိုလ်ဒါများရရှိရန်အမြဲလွယ်ကူလွယ်ကူပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။
Android ၏ Kodi, Pelis Magnet, uTorrent ကဲ့သို့သော application များကိုတပ်ဆင်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။
သို့သော်၊ ဤအပလီကေးရှင်းများကိုတစ်ရက်မှတစ်ရက်အသုံးမပြုပါ။ ဤအပိုင်းတွင် Android မှ iOS application များနှင့်ဝစ်ဂျက်များကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိသည်။ ငါ့အတွက် Fantastical ထက်ပိုကောင်းတဲ့ပြက္ခဒိန်မရှိဘူး။ (ဖြစ်ကောင်းငါအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီးအရမ်းသဘောကျတယ်၊ ဒါပေမယ့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအလှည့်အပြောင်းတွေနဲ့ဆိုရင်တော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်) ။ သင်အများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခရီးသွားမယ်ဆိုရင် Moovit က Android ထက် iOS မှာပိုကောင်းတယ်။ ဤရွေ့ကားဥပမာအချို့သာဖြစ်သော်လည်းယနေ့ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်သည် iPhone ကိုနှစ်သက်သည်။
Face ID အတွက်တော့မလိုအပ်တဲ့အရာလို့ပြောရင်၊
အများကြီးလိုအပ်နှင့်ကောင်းစွာရှင်းပြဆောင်းပါး။ iPhone6ကိုထုတ်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့အိုးတွေဆုံးရှုံးသွားပြီးရဲရင့်စွာခေါ်လာကြတယ်။ နားကြပ်ကိုပိတ်ထား၊ ကျွန်ုပ်တို့၌ဤမျှလောက်များများရှိပါသလား။ home ခလုတ်ကိုပိတ်ထားသလား၊ လေယူရန်၊ အခြားအရာများ။ ahhhhhh ကျွန်ုပ်၏ဆင်းရဲသော iphone 5s၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုလေးစားတန်ဖိုးထားဆဲဖြစ်သည်၊ ကင်မရာသည်ကပ်လျှက်မထားသင့်သည့်အချိုးအစားများကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသိမ်းထားသည်။
မူရင်းထုတ်လုပ်ပြီးဆယ်စုနှစ်သုံးခုအကြာတွင် King's Knight သည် Android သို့ရောက်လာသည်
Drive ကို Android နဲ့ဘယ်လိုအလိုအလျောက်စည်းညှိနိုင်မလဲ